Pakistana: Fahamarinan-toerana, Fikatrohana ary Fahalatsahana an-katerena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2018 6:13 GMT
Raha vao nivoaka ny tena marina mikasika ilay fahalatsahana ankaterena, manadihady ny hevitra momba ny demokrasia sy ny fahamarinan-toerana ao amin'ny firenena ny fanehoankevitr'ireo blaogera, eo am-pijerena ny vokatry ny toedraharaha politika ankehitriny. Manasongadina ny lafiny tsara sy ny lafy ratsin'ny tsenambola lehibe indrindra ao Karachi i Metroblogging Lahore, ary ny hoe mety ho hita ao amin'ny Tsenambolan'i Lahore ny fironana toa izany.
Nilentika tany ambanin'ny fepetran'ny Fahalatsahana an-katerena ny Tsenambolan'i Karachi (KSE 100) nandritra ny andro voalohany fifampiraharahana tamin'ity Alatsinainy ity, izay naharaketana ny fihenana goavana indrindra, isa 635. Na izany aza, nahazo toerana sasantsasany ihany ilay tsena tamin'ny Talata tamin'ny fiakarany nanomboka tamin'ny isa 146.87 ka hatramin'ny 13,426.1 tamin'ny fikatonany.
Manome fanavaozana mikasika ny hetsi-panoherana ataon'ny mpianatra ao Lahora ihany koa ilay blaogy.
Hafa ny fomba fijerin'i iFaqeer ilay toedraharaha, fomba fijery iray manasongadina fa mety tsy ho mpandray anjara malemy manoloana ny toedraharaha ara-politika fotsiny ny vahoaka.
Toy ny lazain'i Adil, mahita sary ny vahoaka ary ny hany zavatra tsapan'izy ireo dia ny henatra ho an'ireo polisy lahy 5 nidaroka mpisolovava mpiaro; Tsy mahatsapa zavatra hafa ankoatran'ny fireharehana aho, satria Pakistaney iray mametraka ny tenany an-tambajotra noho ny fotokevitra arahiny aho. Ny olona mahita fampanginana ny haino aman-jery; Izaho kosa mahita mpanao gazety izay tsy hananan'ny mpanao didy jadona safidy hafa afa-tsy ny handrara azy ireo.
Hevitra sy fanehoankevitra miteraka resaka ao amin'ny Sepia Mutiny toy ny soratan'i Abhi
Mba hazava tsara, tsy leferiko ny fanagadrana mpisolovava mpiaro sy mpitsara, fa tsy mbola vonona amin'ilay karazana demokrasia iadiany ankehitriny i Pakistana. Tsy misy porofo na iray aza hoe ho tsara ny voka-pifidianana raha hisy izany, na kandidà iray afaka tendrena ho mpandimby mahay an'i Musharraf, iray heverina fa hahavita hanome antoka amin'ny fahamarinan-toerana ao Pakistana ary any Afghanistan sy any Iraka ihany koa.
Maneho hevitra manohitra izany fomba fijery izany i Amardeep, blaogera iray hafa ao amin'ny Sepia Mutiny.
Ity no fomba fijeriko: ilaina ho an'ny fisian'ny demokrasia ny fifidianana, fa tsy ampy mba hahafahan'ny demokrasia mitoetra maharitra izany. Ny zavatra tokony nataon'i Musharraf, raha tena nihevitra ny tetezamita mankany amin'ny demokrasia ho toy ny zava-dehibe marina izy, dia voalohany, ny namela ny Fitsarana Avo handidy raha toa ka azo ekena ny fifidianana filoham-pirenena natao vao haingana. Faharoa, nila namela ny fanamiany izy (na dia mila manaiky aza fa izany no voalohany tokony nitranga ). Fahatelo, ny Fifidianana Parlemantera.
Mifantoka amin'ny fikatrohana araka ny lalàna ny blaogy Indiana iray, Law and Other Things, araka ny endrika vaovao isehoan'ny toedraharaha mitranga ao Pakistana. Milaza i Indian Muslims fa naverina tany amin'ny lasa indray i Pakistana ary toa tsy mahazo fanohanana na avy amin'ny andaniny na avy amin'ny ankilany i Musharraf.
Very fahefana tsikelikely i Musharraf. Amopangain'ireo mpiray foko aminy izy ho namono ny vahoakany ihany sy nanamboatra fanaovana vy very ny aina amin'ny fanapoahana baomba, zavatra iray vaovao mahafaty nafarana ho ao Pakistana. Ampangain'ireo Pakistaney laïka, teo ambanin'ny fitondrana jadona, izy ho tsy nahavita niaro an'i Pakistana tamin'ny fitomboan'ny fanaovana herisetra ao Pakistana.
Mieloelo any ny fikatrohana. Mampifandray aminà tahirin-kevitra iray i Chapati Mystery -
Avy any amin'ireo mpianatra sy ireo mpikatroka ao Pakistan ny The Emergency Telegraph [rohy pdf] – ny olana voalohany indrindra amina bokikely manontolo izay manantena ny hameno ny banga napetraky ny
fiatoan'ny haino aman-jery ao Pakistana. Ahitana teny kely avy amin'ny Asma Jahangir ary koa rohy hafa, fijoroana vavolombelona sns… izany.